Version 0.6.4 – Na shoemaker abụghịzi ụkwụ ọtọ
October 14, 2010 site na rịọ 2 Comments
Mat na na na
Oge nke a anyị na-esonyere site dịghị onye ọzọ karịa Mat Mullenweg, Onye Okike nke WordPress usoro ụzọ.
Na ndị na-esonụ kpamkpam adịgboroja intariu, Mat ga-enyere anyị niile na-aghọta ihe dị ọhụrụ na 0.6.4:
Ofer: Ndewo Mat, kedu ka ị taa?
Mat: Na m na otú obi ụtọ banyere ihe a mgbe 0.01 ntọhapụ nke ngwa mgbakwunye tupu!
Ofer: Ntak emi?
Mat: Echere m na ị na-emesị echefu mmụọ nke WordPress a tọhapụ
Mat: Ee, ị na-emesị tụnyere ihe na ikpo okwu kama hacking gburugburu, M na-amasị eziokwu na ị ke akpatre ama oge ma mee ka gị na ngwa mgbakwunye interface na ochichi peeji nke translatable, ma ebe ọ bụ na ị dị ka mma, ị ga-esi nwere onwe blog!
Ofer: Nna, ekele! ugbu a, olee otú m ga-esi ndị ọzọ ndị mmadụ na-eme ka nsụgharị m ngwa mgbakwunye?
Mat: Naanị ịjụ ọrụ gị aka ime nke ahụ, M n'aka na ị na-enye ha n'aka.
Ofer: Gwa ha dum ihe poedit na stof?
Mat: Bịanụ, ka m mgbe niile na-ekwu, e nwere ngwa mgbakwunye n'ihi na! Na i kwesịrị ịbụ maara na ebe ọ bụ na ị na sụgharịrị ya onwe gị, nyere ụfọdụ obere fixes.
Ofer: Ị na-eche codestyling orunótu?
Mat: Ee, nke ahụ bụ onye, na onye ọ bụla nwere ike iji ya. Ma, enwere m ajuju maka gị
Mat: Ee, Gịnị mere ị na-eji Transposh nke na-eme ka?
Ofer: Mere n'ezie ịhụ ihe mere, dị ka e nwere ugbua oké ngwa mgbakwunye n'ihi na ọ, mere emepụtaghachi?
Mat: M na-ahụ na ị na-emesị na-echefu ya.
Ofer: Na-echefu ihe?
Mat: Mmụọ nke WordPress, ekerịta, n'anya, oghe iyi, na free ịhụnanya.
Ofer: M na-ele anya ya mere, na-ekele gị nke ukwuu maka na anyị.
Mat: Daalụ, oge ọzọ, biko ọnụ m isi mma, ma ọ bụrụ na m na-eme adịgboroja ajụjụ ọnụ ọ bụla obere ngwa mgbakwunye ufụn ke WordPress, Aga m mgbe n'efu oge n'ezie mma WordPress ma wordcamps.
Ofer: Ga-ewe mara, daalụ ọzọ!
Ọfọn, ekele Mat maka isonyere anyị, ụfọdụ atụmatụ nakwa kwukwara, a version bụ Latin translation kwukwara, (na google translation nkwado), atọ asụsụ ọhụrụ agbakwunyere Bing ntụgharị. Ike iwepu ihe gettext mwekota ebe ọ na-akpata nsogbu, ụfọdụ ndị ọzọ fixes.
Dị ka mgbe niile – anyị na-atụ anya ka ị ga-enweta ihe a version
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: Bing (MSN) nsụgharị, adịgboroja ajụjụ ọnụ, gettext, google ntụgharị, Mat mullenweg, obere, ọzọ asụsụ, tọhapụ